Xildhibaanadii diidanaa gudoomiye Shariif Xasan oo sheegay inay la kulmeen madaxwayne Sheekh Shariif – Radio Daljir
Xildhibaanadii diidanaa gudoomiye Shariif Xasan oo sheegay inay la kulmeen madaxwayne Sheekh Shariif
Diseembar 27, 2011 12:00 b 0
Muqdisho,Dec,27 -Qaar ka mid ah xildhibaanadii baarlamaanka Soomaaliya ee dhowaan shaaciyay inay xilkii ka qaadeen afhayeenka baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa maanta sheegay inay la kulmeen madaxwaynaha dowladda faderaalka Shariif Sheekh Axmed.
Gudi xildhibaano ah loo xilsaaray la kulanka madaxwayne Sheekh Shariif ayaa tiradooda la sheegay inay gaarayso 9 xubnood,qorshahooduna uu ahaa inay madaxwaynaha dowladda faderaalka ka dhaadhiciyaan inuu taageero go’aankii ay xilka uga qaadeen gudoomiye Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Wararka ayaa sheegaya in madaxwaynaha dowladda faderaalka Shariif Sheekh Axmed uu ku gacan saaray codsiga ay usoo jeediyeen gudigii xildhibaanada ahaa ee kulanka la qaatay,waxaana wararka laga helaayo xildhibaanada diidan Shariif Xasan ay intaasi ku darayaan in maalinta bari ah ay qorsheeynayaan inay kulan ku yeeshaan xarunta baarlamaanka ee Golaha Shacabka.
Khilaafka u dhaxeeya xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ah mid sii xoogaysanaya, xili gudoomiyaha baarlaamaanku uu sharci daro ku tilmaamay talaabadii ay xildhibaanda qaarkood ku sheegeen inay xilkii uga qaadeen.
Dhinaca xukuumadda faderaalka Soomaaliya ee uu hogaaminayo ra’isal wasaare Cabdiwali Maxamed Cali ayaa dhawaan shaacisay in baarlamaanku uusan wax kulan ah ku yeelan karin xarunta golaha shacabk mudo 30 bari ah,kadib markii mudo laba jeer ah fadhi ay lahaayeen baarku uu kusoo dhamaaday dagaal feer ah oo dhexmaray xildhibaanada.
Hawgallo amni oo lagu qabtay dad laga shakiyey oo laga fuiyey caasimada Puntland ee Garowe.